Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways waxay la dagaallameysaa ka ganacsiga duurjoogta sharci darrada ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • News • Dadka • Wararka Qadar • Waajib ah • Ammaanka • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Qiimaynta Ganacsiga Duurjoogta Sharci -darrada ah (IWT) waxaa soo diyaariyey Ururka Gaadiidka Cirka ee Caalamiga ah (IATA), iyada oo taageero ka heleysa ROUTES, oo qayb ka ah IEnvA - IATA maaraynta deegaanka iyo nidaamka qiimeynta ee shirkadaha diyaaradaha. U hoggaansanaanta IWT IEnvA Heerarka iyo Dhaqannada Lagu Taliyay (ESARPs) waxay u saamaxaysaa saxiixayaasha diyaaradda United Baaqa Buckingham Palace si ay u muujiyaan inay hirgeliyeen Ballanqaadyadii ku habboonaa Baaqa dhexdiisa.
Qatar Airways, oo ah xubin aasaase u ah United for Taskforce ee Gaadiidka Duurjoogta, waxay saxiixday Baaqii taariikhiga ahaa ee Buckingham Palace sanadkii 2016.
Bayaanka Qasriga Buckingham ayaa looga golleeyahay in la qaado tillaabooyin dhab ah oo lagu xirayo waddooyinka ay ka faa'iidaystaan ​​ka -ganacsiga ka ganacsiga duur -joogta sharci -darrada ah, si loogu wareejiyo badeecadooda.
Bishii Maajo 2019, Qatar Airways waxay noqotay diyaaraddii ugu horreysay adduunka ee ku guuleysata shahaadada Qiimaynta Ganacsiga Duurjoogta Sharci -darrada ah (IWT).
Qatar Airways waxay ballaarisay ka -qaybgalka USAID ROUTES (Dhimista Fursadaha Gaadiidka Sharci -darrada ah ee Noocyada Khatarta ku ah) Iskaashiga, iyadoo xoojineysa ballanqaadkeedii ahaa inay la dagaallanto ka ganacsiga sharci -darrada ah ee duur -joogta iyo wax -soo -saarkeeda.
Madaxa Fulinta Kooxda Qatar Airways, Akbar Al Baker
Qatar Airways, xubin aasaasihii United for Taskforce Gaadiidka Duurjoogta, saxiixay taariikhi ah Baaqa Buckingham Palace sannadka 2016, oo looga golleeyahay in la qaado tillaabooyin dhab ah oo lagu xidhayo waddooyinka ay ka faa'iidaystaan ​​ka -ganacsiga ka ganacsiga duur -joogta sharci -darrada ah, si loo raro badeecadooda. Intaa ka dib bishii Maajo 2017, shirkaddu waxay sii wadday inay saxiixdo Heshiiskii Isfahamka ee ugu horreeyay oo ay la yeelatay Iskaashiga ROUTES. Bishii Maajo 2019, Qatar Airways waxay noqotay diyaaraddii ugu horreysay adduunka ee ku guuleysata shahaadada Qiimaynta Ganacsiga Duurjoogta Sharci -darrada ah (IWT). Shahaadada Qiimaynta IWT waxay xaqiijinaysaa in Qatar Airways ay leedahay habraacyo, tababar shaqaale iyo hab maamuus warbixineed oo ka dhigaysa tahriibinta alaabada duurjoogta ah ee sharci -darrada ah mid aad u adag.
Qatar Airways Madaxa Fulinta Kooxda, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Ganacsiga duurjoogta ee sharci -darrada ah oo aan sii socon karin wuxuu halis ku yahay noolaha noolaha ee caalamiga ah, wuxuuna khatar ku yahay caafimaadka iyo badbaadada, gaar ahaan bulshooyinka la haybsooco. Waxaan qaadaynaa tillaabooyin aan ku carqaladeyneyno ganacsigan sharci darrada ah si aan u ilaalino kala duwanaanshaha noolaha iyo inaan ilaalino hab -nololeedkayaga jilicsan. Waxaa naga go'an hoggaamiyeyaasha kale ee warshadaha duulista si aan xoogga u saarno siyaasaddeenna dulqaad la'aanta eber ee ku aaddan ka ganacsiga sharci-darrada ah ee duur-joogta iyo wax-soo-saarkeeda, waxaanan ku biirnaa Iskaashiga ROUTES annaga oo leh-'Nalama Duusha'. Waxaan sii wadi doonnaa inaan la shaqeyno daneeyayaashayada si aan kor ugu qaadno wacyiga iyo inaan hagaajinno ogaanshaha howlaha duur -joogta sharci -darrada ah si loo ilaaliyo noolahaas aan qiimeyno. ”
Mr. Crawford Allan, Hoggaamiyaha Iskaashiga ROUTES, ayaa soo dhoweeyay hoggaanka Qatar Airways oo muujisay dadaallada looga hortagayo ka ganacsiga duur -joogta isagoo yiri: Baaqa Buckingham Palace iyo yoolka Iskaashiga ROUTES. Waan ku faanayaa inaan arko in Qatar Airways ay sii waddo dadaalladan oo ay qayb ka tahay tirada sii kordhaysa ee shirkadaha si ay u dhahaan Nalama Duuli.
Faafida COVID-19 waxay muujisay in dambiyada duurjoogtu aysan khatar ku ahayn oo kaliya deegaanka iyo noolaha, laakiin ay sidoo kale tahay caafimaadka aadanaha. In kasta oo la xaddiday safarka, warbixinnada ku saabsan qabashada duur -joogta sharci -darrada ah sannadkii la soo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday in tahriibiyeyaashu ay weli ka faa'iideysanayaan fursadaha ay ku tahriibiyaan tahriibinta iyagoo maraya nidaamka gaadiidka cirka. Qatar Airways waxay aqoonsan tahay iyadoo taageero ka heleysa iskaashiga USAID ROUTES, in warshadaha gaadiidka cirka ay u dhaqaaqi karaan meeraha cagaaran oo ay ku jiraan nidaamka deegaanka iyo ilaalinta duurjoogta, qeybaha muhiimka ah ee dhaqaalaha duurjoogta oo kobcaya iyo bulshooyinka maxalliga ah.
Isagoo saxiixay caleema -saarkii Baaqa Buckingham Palace bishii Maarso 2016 iyo xubin aasaase u ah United for Taskforce Gaadiidka Duurjoogta, Qatar Airways waxay leedahay siyaasad aan dulqaad lahayn oo ku wajahan gaadiidka duur-joogta sharci-darrada ah iyo alaabadooda. Xamuulka Qatar Airways Cargo wuxuu bilaabay cutubka labaad ee barnaamijkiisa joogtaynta ee WeQare: Dib -u -dhis meerayaasha bilowgii sannadkan, oo diiradda lagu saaray sidii dib loogu celin lahaa xayawaanka duurjoogta ah deegaankooda dabiiciga ah, oo lacag la’aan ah. Qorshaha xamuulka qaada ee lagu ilaalinayo duur-joogta iyo dib-u-duurka meeraha ayaa la jaanqaadaya ballan-qaadka shirkadda ee la-dagaallanka ka ganacsiga duur-joogta iyo ka ganacsiga sharci-darrada ah ee duur-joogta sidaasna lagu ilaaliyo bay'ada iyo meeraha Dhulka.